म पनि कम्युनिष्ट
नेकपाका होनहार कम्युनिष्ट घनश्याम भुसाल यतिबेला नेकपा सिद्धान्तहीन बन्न पुगेकोमा दु:खित छन् । उनका साथीले उनलाई भनेछन्– हामी कम्युनिष्टले राजनीतिलाई कस्तो बनायौं ? जुन वर्गका लागि हामी राजनीतिमा लागेका थियौं, पार्टीमा त त्यो वर्ग नै रहेन । यो पढेर म चकित छु, थकित छु ।
किनकि मैले पनि सूर्यचिन्ह लिएर चुनाव उठे, महालक्ष्मी नगरपालिकाको महिला सदस्यमा जितें । म पनि चरित्रको सिद्धान्तनिष्ट कम्युनिष्ट हुँ । असहाय, कमजोर र जनजिविकाका लागि संघर्षरत बर्गको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने भावना मेरो थियो र त्यही भावनाले मलाई सूर्यचिन्ह निकट पुर्‍यायो । सूर्यले त प्रकाश छर्नुपर्ने हो, जनताले जुन विश्वासको मत दिएका छन्, जनताको त्यो विश्वासको जगमा उभिएको छ नेकपा । सरकारको कमाण्ड नेकपाको हातमा छ । तर पार्टी नेतृत्वदेखि तल्लो स्तरसम्म, सिंहदरवारदेखि गाउँतहसम्म कतै पनि नेकपाका कार्यकर्ताहरु नै सन्तुष्ट छैनन्, असन्तुष्टि हामीभित्रै पन्पिएको स्थिति छ ।
किन ? हामीलाई जनताले दुई तिहाई नै बहुमत दिलाइदिएका छन् । कसले हल्लाउने ? कसले लछार्ने, पछार्ने ? यति बलवान भीम बन्नुपर्ने नेकपा बिबादै बिबादमा मुछिन थालेको छ । नेकपालाई सूर्यसरि उज्यालो छर्ने पार्टी बनाउनु पर्ने जिम्मा नेतृत्व र नेकपाका समष्टि पंक्तिको काँधमा छ तर मुहान बिबादमा मुछिदा बहाव फोहर बन्दै गएको छ, बहाव प्रदूषित हुनु भनेको जनविश्वासप्रतिको घात हो, जनजवाफदेही हुन नसकेको प्रमाण हो । यसमा म दु:खित छु ।
नेकपा सुशासन र समृद्धिको बाहक हुनुपर्छ । यसमा शंका छैन । नेकपाको एकमात्र उद्देश्य समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हो । यो उद्देश्यपूर्तिका लागि नेतृत्वगण र हामी कार्यकर्ता कण कति जिम्मेवार भएका छौ । यसमा विश्लेषण, आत्ममिमांसा र गल्ती कमजोरी सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने खाँचो छ । पार्टीभित्र गुट र उपगुटका कारण तल्लोतहसम्म यसको असर परेको छ । समस्या क्रोनिक नहोस्, नेकपा फेरि सडकमा पुग्नु नपरोस्, यो हेक्का राखेर जिम्मेवारीका साथ प्रस्तुत हुनुपर्छ, यो कर्म पार्टी, सरकारदेखि सतहसम्म बस्ने सबैले मनन गर्नुपर्छ । अन्यथा ठेस लाग्छ, अचेत भए, चेत नखुले परिणाम पाहा पछारिएजस्तो पछारिनुमात्र हो ।
द्वन्द्व पार्टीभित्रै छ भने हामीले कसरी सुशासन दिने । सुशासन दिनका लागि हामीभित्र विवाद हुनुहुन्न । भ्रष्टाचार देशको रोग हो, भ्रष्टाचार र अनियमितता निमिट्यान्न नपारेसम्म देशको प्रगति सम्भव नै छैन । त्यसका लागि हामीमा निष्ठा र नैतिकताको विकास हुनुपर्छ । घनश्याम भुसालदेखि भीम रावलसम्म जे भनिरहेका छन्, माधव नेपालदेखि वामदेवसम्म जे बोलिरहेका छन् र सरकार प्रमुख तथा पार्टी अध्यक्षद्वयको जुन भावभङ्गी, अभिव्यक्ति छ, त्यसमा र्‍याङ्मा ठ्याङ् मिलिरहेको छैन । यसले अन्यौलता बढेको छ । म पनि कम्युनिष्ट, म पनि अन्यौलमा छु । यद्यपि मैले मेरो स्तर र ठाउँबाट गर्नुपर्ने सुकर्म छाडेको छैन ।
नेकपामा दाग लाग्नुहुन्न, नेकपा सुशासनको प्रतिनिधि पार्टी बन्नुपर्छ । यसका लागि पार्टी र सरकारमा रहेका नेतृत्वले सुनिर्णय गरेर देशलाई सुसूचित पार्नुपर्छ, जे सुनिएका छन्, ती सबैलाई गल साबित गर्नुसक्नुपर्छ ।